DAAWO VIDEO: Hay’adda NISA oo soo bandhigtay Fanaankii Al-Shabaabka Noqday ‘Afkiisa ayuu ku qirtay‘! – HalQaran.com
DAAWO VIDEO: Hay’adda NISA oo soo bandhigtay Fanaankii Al-Shabaabka Noqday ‘Afkiisa ayuu ku qirtay‘!
by Weriye Ahmed Abdi	 January 22, 2020 156 Views
Fanaankii Shabaabka Noqday, Abshir Gaarane Axmed
Muqdisho (Halqaran.com) – Hay’adda Nabad Suggida iyo Sirdoonka Qaranka (NISA) ayaa waxay soo bandhigtay muuqaal kooban, oo laga soo duubay Abshir Gaarane Axmed oo ka mid ahaa Fanaaniinta Gobolka Banaadir.
Muuqaalkan oo lagu baahiyay barta NISA ku leedahay Twitter-ka ayaa lagu yiri “Abshir Gaarane Axmed oo ka tirsan Kooxda Fanka Gobalka Banadir, una qaabilsanaa argagixisada Al Shabaab xuuraanka & maaliyadda ayaa dabagal dheer ka dib NISA gacanta ku soo dhigtay, iyadoo loo gudbinayo Hay’adaha Garsoorka.”
UPDATE: Xildhibaan Dalxa oo loo magacaabay booskii uu iska casilay Danjire C/raxmaan Guulwade
#Abshir Gaarane Axmed #Fanaan la shaqeynayay Al-Shabaab oo la qabtay #Fanaankii Shabaabka noqday #Hay'adda NISA oo soo bandhigtay
Previous Post Ahlu Sunna oo ka hor-timid doorashada madaxweynaha Galmudug ee dhawaan la qabanayo, Sabab! +(War-saxaafadeed)
Next Post Duqeyn lagu garaacay deegaanno ay maamulaan Al-Shabaab & Wararkii ugu dambeeyay